How'd it happen and more reports?: Xiaomi က Q2 2016 ခုနှစ်တွင် $ 40 ဘီလီယံ၏ရုတ်တရက်အရှုံးပေါ်တယ် ဘာတွေများ အမှားလုပ်မိလို့လဲ?
Xiaomi က Q2 2016 ခုနှစ်တွင် $ 40 ဘီလီယံ၏ရုတ်တရက်အရှုံးပေါ်တယ် ဘာတွေများ အမှားလုပ်မိလို့လဲ?
Reasons why Xiaomi gotasudden loss of $40 bn in Q2 2016!
ယခုတွေ့မြင်သုတေသနကုမ္ပဏီအိုင်ဒီစီဒီဖြန့်ချိသည့်စာရင်းဇယားများအရ 2015 ခုနှစ်၏တူညီသောကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 2016 ၏ဒုတိယသုံးလပတ်ကာလအတွင်းယင်း၏စမတ်ဖုန်းများ၏ရောင်းအားအတွက်ကြီးမားတစ်စက်မြင်တရုတ်ဒုတိယရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သူ Xiaomi က Xiaomi သည်တရုတ်ဈေးကွက်ကုမ္ပဏီများသည်နှင့်တူ LG ကနှင့် HTC ရန်အလေးအနက်ဒုက္ခပေးခြင်းကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ Q2 2016 ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင် 40% တို့ကစမတ်ဖုန်းများ၏ရောင်းအားကျဆင်းလာမမြင်စဖူးသော်လည်းဤရုတ်တရက်အရှုံးတစ်လှန်ဖို့ကဒီမှာလိုပုံရသည် လက်ရှိအခန်းသစ်ကိုစာမျက်နှာ။ Apple Inc. , တရုတ်အတွက်ကောင်းစွာဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်အလားတူအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ကောင်းစွာ Xiaomi က၏တိုးတက်မှုထွက်လာပါတယ်ထားပါတယ်နဲ့တူပါကပုံရသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် ၄င်း၏ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အကောင်းဖျော်ဖြေမပေးပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Huawei Oppo နှင့် Vivo ကဲ့သို့အခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရောင်းအားသိသိသာသာကြီးထွားမြင်နေရသည်။ Huawei ကပင်ရဲရငျ့စှာကုမ္ပဏီအဘယ်သူမျှမဖြစ်လာရန်ရည်မှန်းသောစီရင်ချက်ထားရန်ကုမ္ပဏီလုပ်ရသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု prognosticated ။ လာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်း 1 စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ။ Xiaomi က၏အိတ်မှဘုန်းအသရေကိုတင်ကြောင်းအဆိုပါအမည်နှင့်ကျော်ကြားမှုယခုနွမ်းခံရဖို့ပုံရသည်။
Xiaomi ကလွန်ခဲ့သော 12 လအတွင်းစမတ်ဖုန်းရောင်းအားပစ်မှတ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဝင်ငွေပစ်မှတ်လွဲချော်။ လေ့လာဆန်းစစ်သူရစ်ချတ်ဝင်ဆာ၏အဆိုအရအဆိုပါဝင်ငွေ Xiaomi ကပဲ $ 3.6 ဘီလီယံ၏အဘိုးပြတ်ပေးဖို့ထပ်မံ 10-20% ဎ 2016 drop နိုင်ဘူး။ ဤသည်အမှန်ပင်ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေမှတစ်ဦးကြီးတွေဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဘယျအဖွင့်ကိုတစ်ကြိမ်လူတိုင်းချော့မော့သည်ဟု Xiaomi က၏အောင်မြင်မှုကိုမှဖွဈခဲ့သလဲ
အရောင်းနှင့်ဝင်ငွေ Xiaomi ၏ရုတ်တရက်တစ်စက်ကゞင်း၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူအပြိုင်တတ်၏။ အဆိုပါတရုတ်ကုမ္ပဏီနီးပါးတူညီအရှိန်အဟုန်မှာအောင်မြင်မှုမှီ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများအောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့သောကုမ္ပဏီမတတျနိုငျသိရှိစေရန်။ တတ်နိုင်ဈေးနှုန်းများမှာပရီမီယံဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အင်္ဂ࿿ါရပ်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကျက်သရေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ တူညီသောနောက်ကွယ်မှသာအကြောင်းပြချက်အတူတူလမ်းကြောင်းသစ်အတိုင်းလိုက်နာနှင့်တစ်ဦးအလွန်အစောပိုင်းအဆင့်မှာအောင်မြင်မှုရရှိမှုစတင်ခဲ့သူကိုသည်အခြားစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများ entry ကိုဖြစ်သင့်၏ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် Xiaomi ကနဲ့မတူဘဲゞင်း၏ပြိုင်ဘက်အသစ်တစ်ခုစိတ်ကူးတွန်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာ, Vivo ကွေးဖန်သားပြင်ပူဇော်ကြ၏။ Oppo နှင့် OnePlus လျင်မြန်စွာအားသွင်းနှင့်အတူတင်းကျပ်စွာနေ၏။ LeEco သီးသန့်အကြောင်းအရာကမ်းလှမ်း, Huawei ၏ dual-ကင်မရာအယူအဆများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နီးလ် Shah က, CounterPoint သုတေသနနှင့်အတူလေ့လာဆန်းစစ် IBTimes UK တွင်ပြော....
"ငါသည်စမတ်ဖုန်းအာကာသအတွင်း Xiaomi ၏လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ကြီးထွားဒေါင်လိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပထဝီခြေရာကိုတံဆိပ်စံချိန်ထားပြီး, ပိုကောင်းတဲ့ R & D နဲ့ပြိုင်ဘက်အဖြစ်, ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်စွာတီထွင်ဖို့ Xiaomi ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသော့ချက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ "
နောက်ထပ်ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက် Xiaomi ကသာအာရှနိုင်ငံများ၌ကစားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကစားသမားအဖြစ်အနည်းဆုံးဆန်ခါတင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်, အနောကျပိုငျးဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ပြသခဲ့သည်။ အကြီးမားဆုံးထစ် Xiaomi ကဒါမျိုးဈေးကွက်မဆိုရိုက်ထည့်ရန်မဆိုမူပိုင်အစုစုကိုကိုင်မထားဘူးသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သတငျး Xiaomi ကတူညီတဲ့အွန်လိုင်းအရောင်းနှင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာအလုပ်သမားမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်ရန်စီစဉ်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်။
လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ဦးထက်ပိုရင့်ကျက်ဈေးကွက်ထဲဝငျဖို့ပြေးလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြီးမားဆုံးပြဿနာက ၄င်း၏ရှည်လျားသောကူးယူဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် Apple နှင့် Samsung နဲ့တူထူထောင်ကစားသမား features တွေကိုစွပ်စွဲနေပါတယ်။
အစောပိုင်းကအဖြစ်ကောင်းစွာပြောခဲ့သကဲ့သို့, Xiaomi ကသာအာရှနိုင်ငံပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်နှင့်ဤကယ့်ကိုကောင်းစွာကုမ္ပဏီချွတ်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယတွင်စမတ်ဖုန်းရောင်းအားသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်း 72% တို့ကစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။
Xiaomi ကအိန္ဒိယဌာနမှူး Manu ဂျိန်း PTI ပြောသည် -
"ကျနော်တို့ကစမတ်ဖုန်းရောင်းအား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ (ဇူလိုင်လ 2016 မှဇူလိုင် 2014) ကျနော်တို့ ထိုအချိန်မှစ. 72 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားမှုနှုန်းတစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်မြင်ကြပြီ။ ဇူလိုင်လ 2014 ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှောင့်အယှက်။ "
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းအိန္ဒိယအတွက် Tablet, ပါဝါဘဏ်များနှင့် Bluetooth စပီကာကဲ့သို့အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုသိရန်ခက်ခဲပါတယ်။
တစ်ချိန်ကတရုတ်ဈေးကွက်က ၄င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာကျဆင်းလာစောင့်ကြည့်နေသည်အုပ်ချုပ်ကြောင်း Xiaomi က။ ကျနော်တို့ကောငျးစှာကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်သုံးသပ်သူများ၏ဟောကိန်းများကိုက်ညီလျှင်မြင်ချင်နေကြသည်။
ဘယ်ကြောင့် '' တရုတ်က Apple '' င်း၏တောက်ပ-ခုနှစ်တွင်ဆုံးရှုံးသည်တစ်ဦးကဇယား
# တရုတ်-ဘေဂျင်း-Xiaomi-ထုတ်ကုန်အသစ် (CN)
Xiaomi က CEO ဖြစ်သူ Lei Jun ဘေဂျင်းမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်-လွှတ်ပေးရန်အဖြစ်အပျက်မှာမိမိကုမ္ပဏီ၏စမတ်ဖုန်းကိုအားပေးအားမြှောက်။ စမတ်ဖုန်း Xiaomi ၏ဝင်ငွေထက်ပို 90% များအတွက်အကောင့်။ Zhang က Jin ကဆင်ဟွာ-Eyevine / Redux
2015 ရဲ့အစမှာတရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Xiaomi ကအဆိုပါချမှတ်ခြင်းအတွက်ယန္တရားနဲ့တူတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဈေးပေါ, စတိုင်ဟန်းဆက်အစာရှောင်ခြင်းရောင်းချခြင်းနှင့်စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဝင်ငွေခဲ့ကြသည်။ ゞင်း၏အမှုဆောင်အရာရှိဂီတ, apps များနှင့်အင်တာနက်-of-အရာထုတ်ကုန်တစ်ခု "ဂေဟစနစ်" ထွက်လှိမ့်အားဖြင့် Apple, Google နဲ့ Samsung ၏အကြိုက်နှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးယှဉ်ပြိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့လေသည်။ ထိုအ Xiaomi ကပဲ $ 45 ဘီလီယံမှာကုမ္ပဏီတန်ဖိုးတစ်ခုရန်ပုံငွေရှာပတ်ပတ်လည်ကိုလက်စသတ်ခဲ့သည် - "။ ကြံ့" ထိုအချိန်က, ကအောင်, ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပ
Fortune မဂ္ဂဇင်းကဤရက်သတ္တပတ်တစ်ဦးအင်္ဂ࿿ါရပ်ပုံပြင်ထဲမှာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အဖြစ်ထက်နည်း 18 လအကြာ, Xiaomi က Euphoria ပီတိရပ်တန့်ဖို့ screeched ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတဦးကမကြာသေးမီကကုမ္ပဏီကောင်းစွာ CEO ဖြစ်သူ Lei Jun ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သော $ 16 ဘီလီယံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရောင်းအား၌သာ $ 12.5 ဘီလီယံအထိထုတ်ပေးခဲ့ရကြောင်းပြောပြသည်။ သံသယများလည်း ပို. ပို. Xiaomi ကယင်း၏ဖောင်းပွအထိအသက်ရှင်နေထိုင်လိမ့်မည်ဟုသံသယ - နှင့်စမတ်ဖုန်းရောင်းအားသိသိသာသာကျသွားအဘယ်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြသည်။
နောက်ကျော 2015 ရဲ့အစမှာ, Xiaomi ၏လဲ့ယခုနှစ် 100 သန်းယူနစ်၏စမတ်ဖုန်းရောင်းအားရည်မှန်းချက်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနောက်ဆုံးမှာ IDC မှအဆိုအရ, သာ 71 သန်းတင်ပို့။ ကမ်ဘာ့စမတျဖုနျးရောငျးအားရပျတနျ့နသောကွောငျ့ Xiaomi ကゞင်းငျး၏ကပြွအတယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး။ (။ ဒါကဖြစ်ရပ်ဆန်းလည်း Apple ကိုထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်) ဒါပေမဲ့ Xiaomi ၏ရောင်းအားဝေးတဲ့နှင့်များစွာသောပြိုင်ဘက်များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်လဲသေကြပြီ: 2016 ၏ပထမသုံးလပတ်မှာတော့ Xiaomi ကတစ် 26% တစ်နှစ်-over-တစ်နှစ်ကျဆင်းမှုသာ 10.9 သန်းဖုန်းများတင်ပို့။
အရည်အသွေးပြဿနာများစောက် Drop-ချွတ်ဖို့ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။ တချို့ကသည် Mi ဖုန်းကိုအသုံးပြုသူများကနားကြပ် slot နှစ်ခုကနေအက်ဖန်သားပြင်နှင့်ငြိမ်အကြောင်းကိုလူသိရှင်ကြားမြည်တမ်းပါပြီ။ ထိုအ Xiaomi ၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းသည် Mi 5, ဝယ်လက်အသစ်သောဟန်းဆက်များကိုမကြာခဏလောင်သော120˚အက်ဖ် Xiaomi ကဟန်းဆက်ပြဿနာတွေကျနော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးကြဘူး "," အထီးကျန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု "ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်ကပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ရောက်ရှိကြောင်းသတင်းပို့အတူမတ်လအတွက်ゞင်း၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းကတိုင်ကြားမှုများဆွဲဆောင်ခဲ့သည် အားလုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်တိုင်ကြားမှုများ။ "ဒါပေမယ့်ဖုန်းများ '' ရိပ်မိစိတ်မချရအနေနဲ့သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Clark က, အင်တာနက်အတိုင်ပင်ခံမကြာသေးမီကတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဖုန်းကိုပိုင်ရှင်တွေစစ်တမ်းကောက်ယူ။ Apple ကအသုံးပြုသူ 74% ကိုသူတို့အခြား iPhone ကိုရလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်စဉ် Xiaomi ကပိုင်ရှင်များ၏သာလျှင် 37%, သူတို့ကအခြား Xiaomi ကဖုန်းကိုဝယ်ခြင်းကပြောပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ကျသွားစမတ်ဖုန်းရောင်းအားသာ Xiaomi ၏ဂေဟစနစ်မြေပြင်ကိုချွတ်အလွန်ဝေးဆည်းပူးမထားပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုရယူခဲ့သည်။ ကုမ်ပဏီအရာရှိတှကေသူတို့ Xiaomi ကကွံ့ခိုငျရေးခညြွအနှောထံမှ Xiaomi ကဆနျယြာဉျမှအရာအားလုံးကို၏ရောငျးအားယခု မှစ. ငါးနှဈသူတို့ရဲ့စမတျဖုနျးရောငျးအားတူညီနိုငျမညျထငျဟုဆိုသညျ။ သို့သော် Fortune မဂ္ဂဇင်း "Xiaomi ကゞင်း၏ $ 45 ဘီလီယံဖောင်းပွစေရန် Up ကိုတိုက်ရိုက်နိုင်သလား?" တွင်ကရှင်းပြသည်အဖြစ် ကြောင်း Apple ကပါလိမ့်မယ်ဖမ်းသည်ထက်ကြာမြင့်စွာရိုက်ကူး၏ ပို. ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ 26 2015 | SHANGHA
The Xiaom shock!
"အစအဦး FROM မှ, Xiaomi ကဆော့ဖ်ဝဲ, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခု convergence gadget က, မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ device ကိုဖြစ်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။ " ဒါကြောင့်လဲ့, June, Xiaomi က, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူတရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများ၏သြဇာကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအဖြစ်ကြေညာ , Choi ယန်-hee, တောင်ကိုရီးယားရဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူဘေဂျင်း၌သူ၏ကုမ္ပဏီတခုရဲ့ဌာနချုပ်မှာမကြာသေးမီကတွေ့ဆုံစဉ်။
မစ္စတာလဲ့ရဲ့မှတ်ချက်များကိုအသံစခွေငျးငှါအဖြစ် Bland, အစည်းအဝေး Xiaomi ကအကြောင်းကိုအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးတောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးမကြာသေးမီကသည်အထိအနိုင်နိုင်က၄င်း၏နေအိမ်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာလူသိများခဲ့သည့်တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကသွားရောက် deign, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဟောပြောပွဲမှတဆင့်ထိုင်ပြောနေပါတယ်လိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောကゞင်း၏ chaebol-အရှိဆုံးအထူးသက Samsung, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတခု-သောမြင်ကွင်းတစ်ခုပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်မသိမမြင်နိုင်သောဖြစ်ရပြီလို၏စွမ်းရည်ကျော်ကိုရီးယား hubris ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Samsung ကအခြားတောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးက "Xiaomi ကထိတ်လန့်" ဟုခေါ်ထားပါတယ်ဘယ်သို့သောအားဖြင့် upended ခံရဘယ်လောက်စိတ်ပူပြသထားတယ်။
သူကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့, သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဖုန်းကိုလေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်လွှင့်တင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီပြည့်စုံခဲ့ရာစဉ်းစားပါ။ ၄င်း၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းအားကကမ္ဘာပေါ်မှာဆဌမ-အကြီးမားဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတခုအောင်, ယခုနှစ်အစောပိုင်းကအပေါ် 227% တစ်ဦးမြင့်တက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 61m ဟန်းဆက်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်မှာတော့ Xiaomi ကစမတ်ဖုန်း၏ထိပ်-အရောင်းရဆုံးအမှတ်တံဆိပ် (ဇယားကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်လာရန်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်အသုံးပြုပုံနိုင်ငံခြားနှင့်ပြည်တွင်း, ရှေ့ဆက်အားလုံး၎င်း၏ပြိုင်ဘက်၏ခုန်ထွက်ခဲ့သည်။ ဤနှစ်တွင်မစ္စတာလဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် 100 ယူနစ်ရောင်းဖို့လိုသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီပြီးသားဒီရရှိဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့တွန်းအားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကစင်္က࿿ာပူအပါအဝင်အနည်းငယ်အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်အတွက်ဖုန်းများကိုရောင်းချပေးစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာဟန်းဆက်ရောင်းဖို့, Flipkart, အိန္ဒိယရဲ့ဦးဆောင် e-commerce ကုမ္ပဏီတခုနဲ့သဘောတူညီမှုလုပ်ကြံလေ၏။ ယခုလအစောပိုင်းကလည်းကနားကြပ်နှင့်အမေရိကတိုက်ရှိအခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (မသေးဖုန်းများသော်လည်း) ရောင်းချရန်အစီအစဉ်များကိုပြသလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းပိုက်အိမ်ဈေးကွက်လွှမ်းမိုးထက်ပိုခက်ပါလိမ့်မည်။ Google နှင့်ゞင်း၏ Android မှာ app store ကိုအဲဒီမှာပွင့်လန်းခြင်းငှါ, အန်းဒရွိုက် operating system ကို၏ Xiaomi ၏အရသာ, နှင့်ゞင်း၏ app store ကိုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်, တရုတ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။ တရုတ်များမှာကဲ့သို့အခြားထွန်းသစ်စဈေးကွက်တွေမှာအနည်းငယ်စားသုံးသူအဖြစ်က e-Commerce သို့ပလပ်နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဈေးကွက်ဝင်ရောက်အရှင်ဝေးကြော်ငြာနှင့်အုတ်-and မော်တာလက်လီအရောင်းအတွက်ဈေးကြီးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့, အင်တာနက်အရောင်းနှင့်စကားလုံး-of ပါးစပ်ဘက်ဇ်အပေါ်အများအားဖြင့်အားကိုးသည့် Xiaomi ကလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အမြတ်အစွန်းလည်းကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi ကဆဲပုဂ္ဂလိက ၄င်း၏ဘဏ္ဍဍာရေး၏အနည်းငယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြန့်ချိ။ သို့သော် Sanford C. Bernstein ၏မာကုလီ, တစ်ဦးသုတေသနကုမ္ပဏီゞင်း၏ဟန်းဆက်ကို Apple ကရရှိခဲ့သည်ကို double-ဂဏန်းမာဂျင်၏မျိုးလုပ်မသံသယရှိ။ တောင်မှကုမ္ပဏီအဲဒါကိုဟန်းဆက်များထံမှရှိပါတယ် -than fluffy မြှင့်တင်ရေးကစားစရာ-In "Mitu" ဟုခေါ်နေတဲ့ယုန်၏ပုံစံကိုသန်းပေါင်းများစွာရောင်းချရာမှပိုမိုမြင့်မားမာဂျင်ခံစားထားပါတယ်ဝန်ခံသည်။
နောက်ထပ်ရိုက်သွားဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏ゞင်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီများသည်အလွန်အမင်း litigious ဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိဒေသခံပြိုင်ဘက်, (Google ထံမှ Motorola ရဲ့စမတ်ဖုန်းဌာနခွဲဝယ်ထားပါတယ်) ကို Lenovo ကနှင့် Huawei နှင့်မတူဘဲ Xiaomi ကကြီးမားတဲ့မူပိုင်အစုစုမရှိပါ။ Lin က Bin ကိုゞင်း၏သမ္မတကဥပဒေရေးရာတိုကျခိုကျမှုကိုများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်မူပိုင်ခွင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြည့်စွက်ထားပါတယ် says: "ဒါကကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်မျှော်လင့်တစ်ခုခုပါပဲ။ " တကယ်တော့တစ်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးက Xiaomi ကတချို့၏ရောင်းအားရပ်တန့်ရန်ゞင်း၏အမိန့်မနာခံတော်မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည် မူပိုင်ခွင့်အငြင်းပွားမှု, တိုင်းပြည်အတွင်းကゞင်း၏ဖုန်းများကို၏။
ဤအအတားအဆီးပေးသောအဘယ်ကြောင့် Samsung ကစိုးရိမ်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်? အကြောင်းရင်းတစ်ခု Xiaomi ကအလွန်အမင်းကြီးလွန်း, Over-ပီပီ devices များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကုမ္ပဏီတွေတစ်ဦးနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဿုံကိုယ်နှိုက်နေရာချထားလိုက်ပါတယ်သောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ ゞင်း၏အကောင်းဆုံးဟန်းဆက် Apple ရဲ့သို့မဟုတ် Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောမဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကတခြားကနေသူများထက်ဝေးပိုကောင်းဖြစ်ကြဖြတ်-နှုန်းမှာပြိုင်ဖက်-နှင့်သူတို့တစ် unsubsidised iPhone အသစ်မထက်ဝက်သောအရာကိုကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
နောက်တဖန်ကိုရီးယားဝန်ကြီးမစ္စတာလဲ့ဖြင့်သိမ်းကျုံးအခိုင်အမာစဉ်းစားပါ။ စတင်ချိန် မှစ. သူချိတ်ဆက်မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ကြောက်မက်ဘွယ်တန်ခိုးအားနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ဒါကအသုံးပြုသူများကအကျိုးအမြတ်အကြောင်းအရာ, ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများရောင်းဖို့အရှုံးပေါ်-ခေါင်းဆောင်အဖြစ်က Kindle ၏အမေဇုံရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ app များကို ၄င်း၏ "ဂေဟစနစ်" ကိုသစ္စာစောင့်သိနေဖို့အားပေးရာ Apple ၏ခိုင်ခံ့သောဥယြာဉျ, ရောက်ပြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်မှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ Xiaomi ကအမြတ်အစွန်းမရှိဘဲ peddling ဟန်းဆက်များကိုချွတ်စတင်ခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ်ဦးပြန်လာအောင်, "စမတ်အိမ်" gadgetry, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနှင့်ကိရိယာ apps များတစည်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိသမ္မတ Xiaomi ကစိုးရိမ်သင့်ပါတယ်အခြားအကြောင်းပြချက်ကゞင်း၏ဘဏ္ဍဍာရေးစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က 29 ဘဏ်များအောက်တိုဘာလအတွင်းက $ 1 ဘီလီယံချေးငွေကမ်းလှမ်းရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျော် tripped ။ ဒီဇင်ဘာလ၌ GIC, စင်္က࿿ာပူရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်-ဥစ္စာဓနရန်ပုံငွေနှင့်ရုရှားပညာ,, Facebook တွင်အတွက်အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပါအဝင်အများအပြားလေးစားအကျိုးတူအရင်းရှင်နောက်ထပ် $ 1.1 ဘီလီယံထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ တချို့က $ 45 ဘီလီယံမှာတန်ဖိုးထားသောဤနောက်ဆုံးပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, တရုတ်သည်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံး startup upstart စေသည်ရေတွက်ပြီး။ Xiaomi ၏ထိတ်လန့်-and ကွောကျရှံ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပေါ်မိတ်ဆက်။